Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Uppsala län / Heby
Meel uu dhaw Stockholm, Uppsala, Västerås, Arlanda oo leh fursad fiicna oo tareeynka lagu raaco laakin isla markaana leh amaan iyo xasilaanid. Sido kale Degmada Heby waxeey lee dahay dhul duur ah, baadiyo farxad leh, webi shanqad leh, qoorri dheer, jirdiinka dadweeynaha gudaha xuduuda degmada, bulshado badan oo firfircooni leh iyo waxeey taajir ka tahay dhanka ururada.
1,226 kiilomitir oo laba jibaaran
Stockholm 111 kiilomitir
Uppsala 48 kiilomitir
Västerås 53 kiilomitir
Af kurdi, af carabi, afka faariiga, afka dari iyo afka kirundi.
Xafiiska dadweeynaha waxuu ku yaala Heby iyo Östervåla. Maktabdna gudaha Heby, Morgongåva, Vittinge, Tärnsjö iyo Östervåla. Xafiifka adeega bulshada waxuu ku yaalaa Heby. Xafiska Shaqada waxuu ku yaala Heby. Xafiiska canshuraha waxuu ki yaala Uppsala. Jiheeynta-qaxootiga ku ma taalo degmada Heby laakin xaafiska qaabilaada qaxootiga waxuu yaqaaniin af kurdi, af carabi iyo af faarisi. Dukaan gacan labaad oo sii fiican uu kala soocan waxuu ku yaala Heby iyo Östervåla. IKEA waxuu ku yaaala Uppsala. Dukaamo raashin wee ku yaalin xaafadaha badankood. Dukaanka weeyn ee lacagta yar, Karlsson.se waxuu ku yaala Morgongåva.
Degmada Heby waxeey isku suuq galisaa in ee tahay degmada-fardaha iyo isbuuca-xaflada ee dhexbartanka xilliga xagaaga
Xafiisyada arrimaha maddaniga ah Maktabad Faras jooga Heby Xaflad ah Heby
Maamulka caafimaadka gobolka Uppsala Maamulka gobolka Uppsala, garoonka diyaaradaha Arlanda, maamulka waxbarashada ee degmada Uppsala.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Heby